Yan Aung: ဧ၀ံမေသုတံ - အလုပ်နှင့်စိတ်ဓာတ်
ဧ၀ံမေသုတံ - အလုပ်နှင့်စိတ်ဓာတ်
စိတ်ကိုချောင်ပိတ်မထားပါနဲ့။ တစ်ခုလုပ်လို့ မဖြစ်ရင် ဘာမှလုပ်လို့ မဖြစ်ဘူးလို့ မပြောပါနဲ့။ ဘာတွေလုပ်လုိ့ဖြစ်သလဲ ဆိုတာကို မေးပြီး ဖြစ်နိုင်တာတွေကို များများစဉ်းစားပါ။ ဘယ်လိုအခြေအနေမှာ ဖြစ်ဖြစ် လုပ်လို့ဖြစ်တာ ရှိပါတယ်။ သူများတွေ လုပ်လို့ မဖြစ်ဘူးဆိုပြီး ဘာမှ မလုပ်တဲ့ အချိန်မှာ လုပ်လို့ဖြစ်တာကို လုပ်နေတဲ့သူက အောင်မြင်တယ်၊ ကြီးပွားတယ်။ ဥာဏ်ကိုသုံးပြီး ဘ၀ကို တီထွင်နေတဲ့သူဟာ ဘာမှ လုပ်လို့ မဖြစ်ဘူးလို့ ဘယ်တော့မှ မတွေးဘူး။
(နှာ-၃၆၄၊ “တွေးမိတိုင်းပျော်တယ်”၊ ဆရာတော်ဦးဇောတိက)
ကိုယ်လုပ်ချင်တာချည်းပဲ အမြဲတမ်းလုပ်ရတဲ့လူ ဆိုတာကတော့ မရှိလောက်ပါဘူး။ လူတော်တော်များများဟာ အခြေအနေအရ ကိုယ့်ရဲ့ အရည်အချင်း၊ ကိုယ့်ရဲ့ အချိန်ကို ရောင်းရတယ်။ အလုပ်လုပ်တယ် ဆိုတာ အမှန်တော့ အရည်အချင်းနဲ့ အချိန်ကို ရောင်းတာပဲ။ သို့သော် ကိုယ်ပိုင်အချိန်နဲ့ ကိုယ့်ဟာကိုယ် လုပ်ချင်တာတွေ လုပ်ဖို့အတွက် လွတ်လပ်မှု ရှိရမယ်။ အဲဒါမရှိရင်လည်း ဘ၀မရှိတော့ဘူး။
(နှာ-၃၆၆၊ “တွေးမိတိုင်းပျော်တယ်”၊ ဆရာတော်ဦးဇောတိက)
အလုပ်ကနေ ပိုက်ဆံပဲရတယ်၊ တစ်ခြားဘာမှ ကျေနပ်မှု မရဘူးဆိုရင် အဲဒီ့လူဟာ အလုပ်ကြောင့် စိတ်ထိခိုက်မှု၊ ကိုယ်ထိခိုက်မှု ဖြစ်တယ်။
ကိုယ့်ဘ၀နဲ့ ပတ်သက်တဲ့ ရည်မှန်းချက်က ဘာလဲ။ ကိုယ်တကယ် စိတ်အေးချမ်းမှု၊ စိတ်ကြည်လင်မှု၊ စိတ်ချမ်းသာမှုကို ရမယ့် အလုပ်မျိုးဟာ ဘာလဲ။ ကိုယ့်အရည်အချင်းတွေကို အများဆုံးထွက်လာအောင် ထုတ်ဖော်ပြီး အသုံးချရမယ့် အလုပ်မျိုးဟာ ဘယ်လို အလုပ်မျိုးလဲ ဆိုတာကို သိပြီးတော့ ကိုယ့်အရည်အချင်းတွေကို အများဆုံးသုံးနိုင်မယ့် အခြေအနေမျိုးကို နေ့တိုင်း ပြုစုပျိုးထောင်သွားဖို့လိုတယ်။
(နှာ-၃၇၃၊ “တွေးမိတိုင်းပျော်တယ်”၊ ဆရာတော်ဦးဇောတိက)
ဧ၀ံမေသုတံ၊ ကျွန်ုပ်သည် ဤကဲ့သို့ ကြားနာမှတ်သားလိုက်ရလေ၏......
Hmm...I like Sayadaw's quotes. It's good to do reflection of life after reading his writings. Life is..................
Most importantly, we should liveameaningful life in any situation.
အားနာမိတာမှား.... မှား... မှား....
ကံဆိုးသူ မောင်ရှင်သို့ တမ်းတမိခိုက်....
ဧ၀ံမေသုတံ - လွတ်လပ်ခြင်း
ဘလော့ဂ်ပို့စ်လေးများတွင် Footnote ထည့်နည်း
ဧ၀ံမေသုတံ - မိမိကိုယ်ကို ယုံကြည်ခြင်း
မြန်မာဘလော့ဂ်တွေကို တစ်နေရာတည်းမှာ ဖတ်နိုင်ဖို့......
One Man's Dream & blah blah blah....
ဖတ်မိသောစာ ရသောအတွေး (၂) - မျက်နှာသစ်ခြင်း...
ဖတ်မိသောစာ၊ ရသောအတွေး (၁)